Maxaad Ka Ogtahay Mushaharka Madaxda Hay'ada Kala Duwan Ee Caalamka Sida Qaramada Midoobay, Bangiga Adduunka, Jaamacadda Carabta IWM - Waadinews | Somali News and Entertainments
Maxaad Ka Ogtahay Mushaharka Madaxda Hay’ada Kala Duwan Ee Caalamka Sida Qaramada Midoobay, Bangiga Adduunka, Jaamacadda Carabta IWM
Halkan waxaan idinku la wadaagayaa mushaharka ay qaataan madaxda hay’ada kala duwan ee caalamka sida Qaramada Midoobay, Bangiga Adduunka, Jaamacadda Carabta IWM.
1-Xog-hayaha guud ee Qaramada Midoobay: Waxa uu bishii qaataa lacag lagu qiyaasay 19 kun oo Doollar, mushaharkan wax-ka-baddel laguma samaynin tan iyo sannadkii 1997. Laakiin waxaa intaa u dheer miisaaniyad isaga u gaar ah, hoyga iyo ilaaladuna waa u bilaash. 2-Madaxweynaha Midawga Yurub: Waxaa uu bishii qataa 36 kun iyo 624 Doollar.
3-Madaxweynaha Ururka Midawga Kubadda Cagta (FIFA) waxa uu qaataa 125 Kun oo Doollar. 4- Madaxweynaha Hay’adda Lacagta Adduunka (IMF): Mushaharkiisu waa 39 Kun oo Doollar, Sidoo kale waxa uu leeyahay gunnooyin lagu qiyaasay ilaa 6.6 Kun oo Doollar. 5- Madaxweynaha Bangiga Adduunka: Waxa uu qaataa bishii ilaa 40 kun oo doollar. 6-Xog-hayaha Jaamacadda Carabta: Mushahar ahaan waxa uu u qaataa 42 kun oo Doollar, balse waxa uu gunno ahaan u helaa tobanaan kun oo Doollar.
7- Hay’adda Qaramada midoobay u qaabilsan Barbaarinta iyo waxbarashada UNESCO, shaqaalaheeda ugu sarreeyaa waxa ay qaataan ilaa 12.25 Kun oo Doollar. 8- Ururka Midawga Afrika: Shaqaalaha ugu sarreeyaa waxa ay qaataan 5.8 Kun oo Doollar. 9- Bangiga Afrika: Shaqaalaha uga sarreeyaa waxa mushar ahaan u qaataan 11.5 ilaa 12 kun oo Doollar.
Related Topics:Mushaharka madaxda caalamka